Argentina 1-1 Chile & Paraguay 3-1 Bolivia… (Laadkii xorta ee uu dhaliyay Messi, rigooradii uu Vidal lumiyay & wax walba laga bartay kulammadii Copa America ee xalay iyo saakay) – Gool FM
RASMI: Kooxda Arsenal oo ku dhawaaqday saxiixa Ben White
Milan oo wadahadal la furaysa Chelsea si ay kaga hesho badelka Hakan Çalhanoğlu
“Kooxda waxay noqotay awood la’aan kaddib bixitaankii Ramos iyo Varane” Xiddig hore Real Madrid ah
Halyeey Manchester United ah oo uga digay kooxda inay iibiyaan Paul Pogba
Waa kee xiddiga ka tirsan kooxda Atletico Madrid ee isku diyaarinaya inuu ku biiro Manchester United?
Van Dijk oo fariin qiiro leh u diray taageerayaasha Liverpool kaddib markii uu ku soo laabtay garoomada
Sergio Ramos oo fariin u diray Raphaël Varane kaddib markii uu ka tagay Real Madrid
WARBIXIN: Ninkii daqarrada badnaa, Sheydaan Geesa leh, King Kong & Naynaasyada cajiibka ah ee uu leeyahay Prof. Georgio Chiellini!
Kaddib markii ay heshiis cusub ka saxiixatay Dani Carvajal waa kee ciyaaryahanka xiga oo ay Los Blancos doonayso inay qandaraaska u kordhiso?
WARBIXIN: Ciyaaryahanka qura ee uu Lionel Messi ka codsaday Funaanaddiisa, mid uu u diiday Maaliyaddiisa & Labada Laacib ee uu Leo ka qoomamaynayo inuusan ka codsan Maaliyadahoodii?
Argentina 1-1 Chile & Paraguay 3-1 Bolivia… (Laadkii xorta ee uu dhaliyay Messi, rigooradii uu Vidal lumiyay & wax walba laga bartay kulammadii Copa America ee xalay iyo saakay)
Ahmed Nur June 15, 2021
(Brazil) 15 Juun 2021. Kulammada koowaad ee Guruubka A ee tartanka Copa America ayaa xalay lagu ciyaaray dalka Brazil iyadoo ay is faro-sareen xulalka Argentina iyo Chile & xulalka Paraguay iyo Bolivia.
Xulka qaranka Argentina ayaa fursado badan abuuray qaybtii hore ee ciyaara illaa ugu dambeyn Lionel Messi uu shabaqa ku riday laad-xor ah oo ka tuuray meel u dhow xerada ganaaxa, waxaana uu xulkiisa hoggaanka u dhiibay daqiiqaddii 33-aad ee ciyaarta.
Qaybta hore ayaa lagu kala nastay 1-0 oo Chile lagu hor kacayay, balse xulka uu hoggaamiyo Macallin Martin Lasarte ayaa rigoore loo dhigay, waxaana daqiiqaddii 56-aad rigooradaas lumiyay Arturo Vidal kaddib badbaadintii Goolhaye Emiliano Martinez, balse kubadda kasoo laabatay gacmaha goolhayaha waxaa madaxa ku dhaliyay Eduardo Vargas oo ciyaarta ka dhigay 1-1 daqiiqaddii 57-aad ee ciyaarta.
Labada xul ayaa sidaas ku helay min dhibic, waxayna ka hooseeyaan xulka Paraguay oo garaacay Bolivia.
Maxaa laga bartay?
Lionel Messi ayaa saddexdii ciyaarood ee ugu dambeysay oo uu Chile kaga hor tagay Copa America mid ka mid ah waxa uu lumiyay rigoore, mid casaan ayuu qaatay, midna gool ayuu dhaliyay.
Xulka qaranka Bolivia ayaa hoggaanka ciyaarta qabtay daqiiqaddii 10-aad kaddib markii rigoore loo dhigay xulkaas uu gool u baddelay Erwin Saavedra.
Qaybtii hore oo rabshado ku dhammaatay ayaa waxaa casaan la siiyay xiddiga weerarka ugu ciyaara Bolivia ee Jaume Cuellar, markii la isu soo laabtayna, xulka Paraguay ayaa la yimid qaab ciyaareed cajiib ah isagoo saddex gool dhaliyay qaybta labaad.
Alejandro Romero oo daqiiqaddii 62-aad goolka barbarraha keenay iyo Angle Romero oo labo gool raacsaday daqiiqadahii 65-aad iyo 80-aad ee ciyaarta ayaa xulka Paraguay ka saaciday inay guul ku furtaan Copa America 2021.
Xulalka Spain iyo Sweden oo bar-bardhac ku kala baxay kulankii ay kaga daah furteen Koobka EURO 2020… + SAWIRRO
Horudhac: Hungry vs Portugal... (Portugal oo caawa bilaabaya ole'olahiisa difaacashada Euro)